ELISA Assays को लागि अल्ट्रासोनिक नमूना तयारी - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
इलिसा जस्ता एसेजहरू इन-भिट्रो डायग्नोस्टिक्स, रोगसँग सम्बन्धित प्रोटीन पत्ता लगाउने र गुणस्तर नियन्त्रण (उदाहरणका लागि खानाको एलर्जीन निगरानी) को लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक नमूना तयारी एक लाईब सेल गर्न र इंट्रासेलुलर प्रोटीन, DNA, RNA र Organelles अलग गर्न एक द्रुत, विश्वसनीय र प्रजनन प्रविधि हो। हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्सले एकल नमूनाहरूको सुविधाजनक तयारीको लागि बहुविध शीशीहरूको साथ साथै माइक्रोटिटर प्लेटहरू र 96--वेल प्लेटहरूको लागि विभिन्न अल्ट्रासोनिक समाधानहरू प्रदान गर्दछ।
इलिसा – एन्जाइम-लिक्ड इम्युनोसोर्बन्ट परख
इलिसा भनेको एन्जाइम-लि im्क इम्युनोसोर्बेंट परख हो र लिगान्ड-बाइन्डि ass एसेजको कोटीको व्यापक प्रयोग हुने जैव रासायनिक विश्लेषण प्रविधि हो। ELISA मा, तरल नमूना विशेष बाध्यकारी गुणहरूको साथ स्थिर ठोस चरणमा थपिन्छ। सामान्यतया, स्थिर ठोस चरण राम्रो प्लेट वा ELISA प्लेट कोटिंगको रूपमा लागू हुन्छ। तब, विभिन्न तरल अभिकर्मकहरू क्रमशः थपिन्छन्, इनक्युबेट हुन्छन् र धोइन्छन्, जसले गर्दा अन्ततः अप्टिकल परिवर्तन (उदाहरणका लागि, इन्जाइमेटिक प्रतिक्रियाको उत्पादनद्वारा रंग विकास) इनारको अन्तिम तरलमा देखा पर्दछ। अप्टिकल परिवर्तनले एक तथाकथित मात्रात्मक द्वारा विश्लेषणको मात्रा नाप्न अनुमति दिन्छ “पढ्दै "। मात्रात्मक पठनका लागि, प्रसारण प्रकाशको गहनता पत्ता लगाउन र मापन गर्न एउटा स्पेक्ट्रोफोटोमिटर, फ्लोरोमिटर, वा ल्युमिनोमीटर प्रयोग गरिन्छ। पत्ता लगाउने संवेदनशीलता विश्लेषणात्मक प्रतिक्रियाको क्रममा संकेतको प्रवर्धनबाट प्रभावित हुन्छ। इन्जाइम प्रतिक्रियाहरू राम्रोसँग अनुसन्धान र भरपर्दो प्रवर्धन प्रक्रियाहरू भएकोले, इन्जाइमहरू संकेत सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ। एन्जाइमहरू निश्चित अनुपातमा पत्ता लगाउने अभिकर्मकहरूसँग जोडिएका हुन्छन् जसलाई सही मात्राको मात्रा दिन अनुमति दिन्छ, जसले "एन्जाइम-लि -्क" इम्युनोसोर्बेंट परखको नाम पनि वर्णन गर्दछ।
ELISA assays माइक्रोटीटर प्लेट्स / 96--राम्रो प्लेटहरुमा प्रदर्शन गरिन्छ, यो प्लेट-आधारित परख तकनीक को रूप मा परिचित छ र क्लिनिकल इन-भिट्रो डायग्नोस्टिक, अनुसन्धान, औषधि विकास आदि मा पत्ता लगाउन र एंटीबॉडी, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, र पत्ता लगाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ। र हर्मोनहरू।
इलिसा प्रविधी बारम्बार औषधी, बायोटेक, बिरुवा रोगविज्ञानमा डायग्नोस्टिक उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र बहु उद्योगहरूमा एक महत्त्वपूर्ण गुण नियन्त्रण नियन्त्रण पनि हो।
अल्ट्रासोनिक नमूना प्रस्तुत एकाई VialTweeter ELISA assays अघि सेल losis र प्रोटिन निकासी को लागी प्रयोग गरीन्छ
इलिसा भन्दा पहिले अल्ट्रासोनिक नमूना तयारी
ELISA परख प्रदर्शन गर्नु अघि, नमूनाहरूलाई तयारी गर्न को लागी यस्तो चरणहरूको आवश्यक हुन्छ जस्तै सेल लीसिस र इंट्रासेल्युलर प्रोटीन, DNA, RNA आदि को निकाल्ने अल्ट्रासोनिक सेल lysis र प्रोटीन पृथक को फाइदा यसको उच्च दक्षता, विश्वसनीयता र प्रजनन क्षमता हो। यी सबै कारकहरू महत्त्वपूर्ण छन् उच्च गुणवत्ता निदान र अनुसन्धान परिणामहरू प्राप्त गर्नका लागि
ELISA भन्दा पहिले अल्ट्रासोनिक Lysis का फाइदाहरू
पूर्ण प्रोटीन निकासी (जस्तै एन्टिबडी, डीएनए)
सेल प्रकार अनुकूलन अनुकूलन
कुनै नमूना आकारका लागि
SD कार्डमा स्वचालित डेटा प्रोटोकलिंग
पूर्व ELISA अल्ट्रासोनिक सेल L विश्लेषण को लागी प्रोटोकोल
सेल संस्कृतिहरूको लागि: अल्ट्रासोनिक सेल lysis अघि, एक माइक्रोसेन्ट्रिफ्यूमा २0० xg मा min मिनेटको लागि अपकेंद्रित्र कोषहरू। RIPA बफर को --० - १०० μL मा आकांक्षा र रेसपसेन्ड सेलहरू द्वारा सतह सतर्कता हटाउनुहोस्। त्यसो भए, बरफमा सेल गोली इन्काबेट min० मिनेटको लागि।
अब, सेल नमूना अल्ट्रासोनिक lysis को लागी तयार छ:
प्रोब-प्रकार अल्ट्रासोनिकेटर प्रयोग गर्नुहोस् (जस्तै Uf200 ः टी S26d2 प्रोबको साथ) वा एक अल्ट्रासोनिक मल्टि-नमूना उपकरण (उदाहरण १० व्हील्स सम्म एक साथ Sonication को लागि VialTweeter वा माइक्रोटिटर प्लेट्स /---राम्रो प्लेटहरूको लागि UIP400MPT) तपाइँले तयार गर्नु पर्ने नमूनाहरूको मात्रामा निर्भर गर्दछ।
एकल नमूनाको प्रोब-प्रकार सोनिकेशनको लागि, सेलहरू १. m एमएल माइक्रोसेन्ट्रिफ्युज ट्यूबहरूमा राख्नुहोस्।
अल्ट्रासोनिकेटरको डिजिटल मेनूमा तपाईंको अल्ट्रासोनिक अवधि, कुल उर्जा इनपुट, चक्र मोड र / वा तापमान सीमा प्रि-सेट गर्नुहोस्। यो अत्यधिक विश्वसनीय Sonication र पुनरावृत्ति योग्यता सुनिश्चित गर्दछ।
Sonotrode इनसेट गर्नुहोस् र अल्ट्रासोनिक उपकरण स्विच गर्नुहोस्। नमूनाको माध्यमबाट अल्ट्रासोनिक प्रोबको माइक्रो-टिप बिस्तारै सार्नुहोस् नमूनालाई समानरूपमा सोनीकेट गर्न।
धेरै सेलहरूको लागि, अल्ट्रासोनिक lिसिस १० सेकेन्ड Sonication को २ -cles चक्र पछि समाप्त हुन्छ।
Sonication पछि, नमूनाबाट Sonotrode हटाउनुहोस्। नमूनाहरू ice मिनेटको लागि बरफमा ऊँचाउनु पर्छ। त्यसोभए, मलबेको गोलीका लागि २० मिनेटमा १०० xg मा अपकेंद्रित्र। एक नयाँ माइक्रोसेन्ट्रिफ्यू ट्यूबमा सतह सतह थलो स्थानान्तरण गर्नुहोस्। विश्लेषक लेबल गर्नुहोस् र -२० डिग्री सेल्सियस मा स्टोर गर्नुहोस्।
अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोड सफा गर्न सकिन्छ रक्सीको साथ सफा गरेर वा पनीरमा मद्यले भरिएको बेकरमा सोनेटिकेट, जस्तै %०% इथेनॉल। टाइटेनियमबाट बनेका सबै अल्ट्रासोनिक प्रोबहरू स्वत: अस्वीकृत छन्।
टिश्यू होमोजेनेट्सका लागि:
बरफको चिसो PBS (०.०१ एम, pH = .4..4) को साथ टिश्यूलाई कुल्ला
टिश्यू (किडनी, मुटु, फोक्सो, प्लीहा आदि) तौल र यसलाई सानो टुक्रामा पार्नुहोस्, जुन पीबीएसमा एकरूपता भएका छन्। PBS को आवाश्यक मात्रा टिश्युको वजनसँग सम्बन्धित छ। औंठाको नियमको रूपमा, टिश्यू को १g लाई करीव चाहिन्छ। 9mL पीबीएस। PBS मा केही प्रोटीज अवरोधक थप्न सिफारिस गरिन्छ। (आरआईपीए वा हाइप्टोनिक लिसिस बफर प्रोटेस र फास्फेटसे इन्हिबिटर ककटेल समावेश गरी वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।)
टिश्यु साइजमा निर्भर गर्दै, छोटो भंवर उपचार (लगभग १-२ मिनेट। १ sec सेकेन्ड। दाल) टिसुको पूर्व-उपचार गर्न सहयोगी हुन सक्छ।
एउटा माइक्रो-टिप माउन्ट गर्नुहोस्, जस्तै S26d2, तपाईंको अल्ट्रासोनिकेटरमा। नमूना ट्यूबलाई टिसुको साथ आइस स्नानमा राख्नुहोस्।
तपाईको अल्ट्रासोनिकेटरको साथ नमूनालाई सोनिक गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि UP200St (%०% आयाम) १ मिनेटको लागि। नाडी मोडमा (१sec सेकेन्ड अन, १sec सेकेक्स पज)। बरफको स्नानमा नमूना राख्नुहोस्।
होमोजेनेटहरू त्यसपछि विश्लेषणको लागि प्रोटीनलाई समृद्ध बनाउन विशिष्ट पोल्स (साइटोसोलिक, आणविक, माइटोकन्ड्रियल वा लाइसोसोमल) प्राप्त गर्न केन्द्रित गरिन्छ। Minutes००० × g मा minutes मिनेटको लागि नमूना केन्द्रीपसार गरेर, सतह सतह सतहलाई पुनः प्राप्त गरियो।
Sonication समयमा विश्वसनीय तापमान नियन्त्रण
तापक्रम एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया-प्रभावकारी कारक हो जुन जैविक नमूनाहरूको उपचारको लागि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, जस्तै प्रोटीनको तापीय गिरावट रोक्न। सबै मेकानिकल नमूना तयारी प्रविधिको रूपमा, Sonication ताप पैदा गर्दछ। यद्यपि, नमूनाहरूको तापक्रम राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जब हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उपकरणहरू प्रयोग गर्दा। हामी तपाइँको नमूनाहरूको तापक्रम नियन्त्रण र नियन्त्रण गर्न बिभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दछौं जबकि तिनीहरूलाई प्रोब-प्रकार अल्ट्रासोनिकेटर वा वायलट्विटर पूर्व-विश्लेषणात्मक रूपमा तयार गर्दछ।
नमूनाको तापक्रम निगरानी गर्दै: सबै हिल्सचर डिजिटल अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर एक बुद्धिमान सफ्टवेयर र प्लगेबल तापमान सेन्सरले सुसज्जित छन्। तापमान सेन्सरलाई अल्ट्रासोनिक उपकरणमा प्लग गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि, Uf200 ः टी, UP200St, VialTweeter, UIP400MTP) र एउटा नमूना ट्यूबहरूमा तापमान सेन्सरको टिप घुसाउनुहोस्। डिजिटल रंगीन टच-डिस्प्ले मार्फत, तपाईं अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरको मेनूमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको नमूना सोनिकेशनको लागि एक विशिष्ट तापमान दायरा। अल्ट्रासोनिकेटर स्वत: रोकिनेछ जब अधिकतम तापमान पुग्यो र रोक्नुहोस् जबसम्म नमूना तापक्रम सेट तापमानको कम मानमा नपर्दछ ∆। त्यसपछि Sonication फेरि स्वत: सुरु हुन्छ। यो स्मार्ट सुविधा गर्मी प्रेरित गिरावट रोक्छ।
अल्ट्रासोनिक बहु-नमूना इकाई VialTweeter को सन्दर्भमा, टाइटेनियम ब्लक, जसले नमूना ट्यूबहरू समात्छ, प्रि-कूल्ड गर्न सकिन्छ। VialTweeter ब्लक (ट्रान्सड्यूसर बिना मात्र Sonotrode!) फ्रिज वा फ्रीजर मा टायटानियम ब्लक राख्न पूर्व नमूना मा तापमान वृद्धि स्थगित गर्न मद्दत गर्दछ। यदि सम्भव छ भने, नमूना पनि प्रि-कूल्ड गर्न सकिन्छ।
Sonication को समयमा चिसो गर्न एक बरफको स्नान वा सुक्खा बरफ प्रयोग गर्नुहोस्। एक बरफ स्नान मा Sonication समयमा तपाईंको नमूना ट्यूब (हरू) राख्नुहोस्। VialTweeter को लागी, सुक्खा बरफले भरिएको उथले ट्रे प्रयोग गर्नुहोस् र VialTweeter सुक्खा बरफमा राख्नुहोस् ताकि तातो चाँडै नै खस्कन सक्छ।
जैविक, जैव रसायनिक, मेडिकल र क्लिनिकल प्रयोगशालाहरूमा दैनिक दैनिक नमूना तयारी कार्यको लागि ग्राहकहरूले विश्वव्यापी हिल्सचर प्रोब-अल्ट्रासोनिकरेटरहरू साथै बहु-नमूना सोनिकेशन्स युनिटहरू VialTweeter र UIP400MTP प्रयोग गर्छन्। बुद्धिमान सफ्टवेयर र हिल्सचर प्रोसेसरको तापमान नियन्त्रण, तापमान विश्वसनीयतापूर्वक नियन्त्रण गरिन्छ र तातो-प्रेरित नमूना गिरावटबाट बच्दछ। हिलस्चर अल्ट्रासोनिक समाधानहरूको साथ अल्ट्रासोनिक नमूना तयारीले अत्यधिक विश्वसनीय र पुन: उत्पादन योग्य परिणामहरू प्रदान गर्दछ!
ELISA का प्रकार
त्यहाँ इलिसाका धेरै प्रकारहरू छन्, जुन उनीहरूको कामका सिद्धान्तले छुट्याएको छ। तिनीहरू प्रत्यक्ष ELISA, अप्रत्यक्ष ELISA, स्यान्डविच ELISA, प्रतिस्पर्धी ELISA, र उल्टो ELISA को रूपमा परिचित छन्। तल, हामी तपाइँलाई विभिन्न ELISA प्रकारहरू र उनीहरूको मुख्य विशेषताहरू र भिन्नताहरूको बारेमा सिंहावलोकन प्रस्तुत गर्दछौं।
ELISA गुणात्मक वा मात्रात्मक ढाँचामा चलाउन सकिन्छ। गुणात्मक परिणामहरूले सामान्य सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम प्रदान गर्दछ, जबकि मात्रात्मक ELISA मा नमूनाको अप्टिकल घनत्व (OD) एक मानक वक्रसँग तुलना गरिएको छ, जुन सामान्यतया लक्षित अणुको ज्ञात एकाग्रता समाधानको क्रमशः कमजोर हुन्छ।
प्रत्यक्ष इलिसा एलिसाको सबैभन्दा साधारण परख रूप हो, जहाँ केवल एक एन्जाइम लेबल प्राथमिक एन्टिबडी प्रयोग गरिन्छ र माध्यमिक एन्टिबडीहरू आवश्यक छैन। एन्जाइम-लेबल प्राथमिक एन्टिबडी सीधा लक्ष्य, अर्थात् एन्टिजेन संग बाँध्छ। बफरिएको एन्टिजेन समाधानलाई माइक्रोटेटर प्लेटको प्रत्येक कुवामा (सामान्यतया 96--वेल प्लेटहरू, ELISA-प्लेट्स) थपिएको छ, जहाँ चार्ज अन्तर्क्रिया मार्फत प्लास्टिकको सतह पालन गर्दछ। जब प्राइमरी एन्टिबडीसँग जोडिएको इन्जाइमले यसको सब्सट्रेटको साथ प्रतिक्रिया गर्दछ, यसले एक दृश्य संकेत उत्पादन गर्दछ जुन स्पेक्ट्रोफोटोमिटर, फ्लोरोमिटर, वा ल्युमिनोमीटर मार्फत मापन गर्न सकिन्छ।
अप्रत्यक्ष इलिसा परीक्षणको लागि दुबै प्राथमिक एन्टिबडी र एक माध्यमिक एन्टिबडी आवश्यक छ। जे होस्, प्रत्यक्ष ELISA को विपरित, प्राथमिक एन्टिबडी होइन, तर माध्यमिक एन्टिबडीलाई एन्जाइमको लेबल लगाईन्छ। एन्टिजेन राम्रो प्लेटमा स्थिर छ र प्राथमिक एन्टिबडी द्वारा बाध्य छ। त्यस पछि, एन्जाइम लेबल माध्यमिक एन्टिबडी प्राथमिक एन्टिबडीमा बाँधिन्छ। अन्तमा, सेकेन्डरी एन्टिबडीसँग जोडिएको इन्जाइमले यसको सब्सट्रेटको साथ प्रतिक्रिया देखाउँदछ कि एक दृश्य संकेत उत्पादन गर्न।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ELISA परीक्षणको क्रममा, एन्टिजेन स्थिर र राम्रो प्लेटको सतहमा लेपित हुन्छ, स्यान्डविच ELISA मा एन्टिबडी ELISA प्लेटको प्लास्टिक सतहमा स्थिर छ। स्यान्डविच ELISA मा असक्षम एन्टिबडीहरू क्याप्चर एन्टिबडीको रूपमा चिनिन्छ। क्याप्चर एन्टिबडीहरूको थप रूपमा, स्यान्डविच ELISA मा तथाकथित पत्ता लगाउने एन्टिबडीहरू आवश्यक हुन्छ। पत्ता लगाउने एन्टिबडीहरूले लेबल नगरिएको प्राथमिक पत्ता लगाउने एन्टिबडी र एन्जाइम लेबलको दोस्रो माध्यमिक डिटेक्टि एन्टिबडी समावेश गर्दछ।
स्टेपवाईज, ब्याजको एन्टिजेन क्याप्चर एन्टिबडीको लागि बाँधिन्छ प्लेटमा स्थिर। त्यसो भए, प्राथमिक पहिचान एन्टिबडी एन्टिजेनमा बाँध्छ। पछि, सेकेन्डरी डिटेक्टि एन्टिबडी प्राथमिक खोज एन्टिबडीमा बाँध्छ। अन्तिम प्रतिक्रिया चरणमा, एन्जाइमले यसको सब्सट्रेटको साथ प्रतिक्रिया देखाउँदछ कि एक दृश्य संकेत उत्पादन गर्दछ जुन अप्टिकली पत्ता लगाउन सकिन्छ।
प्रतिस्पर्धी इलिसा, अवरोध ELISA को रूपमा पनि चिनिन्छ, सबैभन्दा जटिल ELISA प्रकार हो किनकि यसमा अवरोधक एन्टिजेनको प्रयोग समावेश छ। प्रत्येक तीन स्वरूप, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, र स्यान्डविच ELISA, प्रतिस्पर्धी ELISA ढाँचामा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धी इलिसामा, अवरोधक एन्टिजेन र ब्याजको एन्टिजेन प्राथमिक एन्टिबडीमा बाध्यताको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
प्रतिस्पर्धी ELISA का लागि, लेबल बिना एन्टीबडी यसको एन्टिजेनको उपस्थितिमा, अर्थात् नमूनामा incubated छ। यि बाउन्ड एन्टिबडी / एन्टिजेन परिसरहरू त्यसपछि एन्टिजेन लेपित कुवामा थपिन्छ।
प्लेट धोईयो, ताकि अनबाउन्ड एन्टिबडीहरू हटाइए। प्रतिस्पर्धी इलिसाको नाम छ भन्ने तथ्यको कारणले कि जति धेरै एन्टिजेन नमूनामा हुन्छ, अधिक एन्टिजेन-एन्टिबडी जम्मा हुन्छन्। यसको मतलब, त्यहाँ कम अनबाउन्ड एन्टिबडीहरू उपलब्ध छन् राम्रो इनटीजनमा बाँध्नका लागि र एन्टिजेन्सले उपलब्ध एन्टिबडीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्दछ। एक प्राथमिक एन्टिबडी, प्राथमिक एन्टिबडीसँग मिल्दो जोडीयो। यो दोस्रो एन्टिबडी एन्जाइममा जोडिएको छ। जब सब्सट्रेट थपियो, बाँकी एन्जाइमहरूले क्रोमोजेनिक वा फ्लोरोसेंट संकेत उत्पादन गर्दछ।
यस विन्दुमा, प्रतिक्रिया सिग्नलको अन्तिम संतृप्तिबाट बच्न रोकिन्छ।
केही प्रतिस्पर्धी ELISA किटमा एन्जाइम-लि anti्क एन्टिबाडीको सट्टामा एन्जाइम-लि linked्क एन्टिजेन समावेश हुन्छ। लेबल एन्टिजेन नमूना एन्टिजेन (लेबल नगरिएको) को साथ प्राथमिक एंटीबॉडी बाइन्डि sites साइटहरूको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दछ। नमूनामा कम एन्टिजेन, अधिक लेबल एन्टीजेन राम्रोसँग राखिन्छ र सिग्नल बलियो हुन्छ।
रिभर्स इलिसाले राम्रो प्लेटहरू प्रयोग गर्दैन, तर एन्टिजेन्सहरूलाई परीक्षण फ्लडमा निलम्बन गर्दछ। रिभर्स ELISA परीक्षण antigen मार्फत बाउन्ड एन्टिबडीको मात्रा मापन गर्दछ। यो खास गरी वेस्ट नील भाईरस ईन्फाफा प्रोटीन पत्ता लगाउन र अनुसन्धान गर्न विकसित भएको हो र यसले भाइरस-विशिष्ट एन्टिबडीहरू कसरी फेला पार्न सक्छ।
एलिजाका लागि प्रयोग ईन्जाइमेटिक मार्कर
तलको सूचीले इलिसा एसेजमा प्रयोग हुने सबैभन्दा सामान्य इन्जाइमेटिक मार्करहरू दिन्छ, जसले परखको परिणामहरू पूरा भएपछि मापन गर्न अनुमति दिन्छ।
ओपीडी (ओ-फेनिलेनेडिआमाइन डायहाइड्रोक्लोराइड) एम्बरलाई HRP (Horseradish Peroxidase) पत्ता लगाउँदछ, जुन अक्सर एक संयुग्मित प्रोटीनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
टीएमबी (3,3′, ,,5′-tetramethylbenzidine) HRP पत्ता लगाउँदा निलो हुन्छ र सल्फ्यूरिक वा फास्फोरिक एसिडको थप पहेँलो पहेलो हुन्छ।
एबीटीएस (२,२′-आजिनोबिस [--एथिलबेन्जोथियाज़ोलिन---सल्फोनिक एसिड] -डिआमोनियम नुन) हरियो हुन्छ जब HRP पत्ता लगाउँदा।
क्षारीय फास्फेटस पत्ता लगाउँदा PNPP (पी-नाइट्रोफेनिल फास्फेट, डिजोडियम नुन) पहेंलो हुन्छ।